Marin-toetra… marin-toerana | NewsMada
Nanjary resaka tato ho ato ny amin’ny maha zava-dehibe ny fifandimbiasan-pahefana mazava, milamina, ara-dalàna. Tsy inona fa amin’ny fomba demokratika amin’ny alalan’ny fifidianana. Misy tsinona ny tsy mahandry tantana? Sanatria, alaim-panahy hanao amboletra, na hanakorontana, na hamaly faty… Tsy vitan’izay, miara-dalana amin’izay hoe fifandimbiasam-pahefana izay koa ny fahamarinan-toerana hahazoana miasa. Amin’ny fomba ahoana?
Tsy ny asa atao sy izay vita ve no antoka amin’ny famitana hatramin’ny farany ny fe-potoam-piasana amin’izay fahefana nampindramin’ny vahoaka… nifidy? Ny asa atao araka ny fanamby sy izay nampanantenaina; indrindra, araka ny hetahetam-bahoaka mifanitsy amin’ny zava-mitranga sy izay iainana eny am-pandehanana. Saika firesaka mandrakariva ihany koa ny hoe natao hitsinjo mialoha izay mety hitranga ny mpitondra. Hanao ahoana àry izao taona vaovao izao?
Ankoatra ny tetikasa goavana hoe hatao na efa an-dalam-panatanterahana, mbola tsy mahafa-bela, ohatra, ny tsy fandriampahalemana; eny, na efa misy fihenana aza: efa tsy firy, ohatra, ny fakana ankeriny. Mampikaikaika ny maro amin’izao koa ny amin’ny fidangan’ny vidim-piainana, ny fahasahiranana amin’ny tsy fahampian’ny rano na ny orana, ny fahapotehan’ny tontolo iainana sy ny famokarana noho ny fitrandrahana tsy ara-dalàna harena an-kibon’ny tany, ny ady tany…
Misy ny azo tsinjovina mialoha amin’izany rehetra izany? Fisorohana izay mety ho fahavoazana, famahana olana izay mety ho fahasahiranana… Handairan’izay mety ho fanelingelenana na fanakorontanana etsy sy eroa ve ny vahoaka, rehefa hitany sy tsapany ary iainany fa tena miasa ho azy izay nampindraminy fahefana ho amin’ny asa fampandrosoana sy fanatsarana ny fiainany andavanandro? Na tena mipaka any ifotony izay lazaina sy atao mahamarin-toetra…
Fahamarinan-toetra tsy miovaova amin’izay tsara sy vita efa natomboka, fanitsiana na fanalana izay mety tsy ahombiazana, ohatra. Fahamarinan-toetra… hahamarin-toerana na amin’izay miasa izany, na ny fomba fiasa, na ny asa atao.